भविष्यमा को कार: यो के हुनेछ?
यसलाई निकट भविष्यमा कार के हुनेछ भन्न गाह्रो छ। तर हामी प्राथमिकता वातावरण, अनुकूल व्यावहारिक हुनेछ पक्का, सहज र सघन मोडेल लागि भन्न सक्नुहुन्छ। शायद यो धेरै कार मालिकहरूको कल्पना विस्मित हुनेछ जो एक ट्रांसफर्मर, हुनेछ। भविष्यमा को कार उडान विज्ञान कल्पना को दुनिया को बाहिर स्पष्ट छ, तर कृत्रिम बुद्धि संग एक आदर्श उपकरण रूपमा नजिक सही हृदयमा कब्जा।
यसलाई अब इन्जिन भन्दा5वर्ष पहिले कम इन्धन आवश्यक टिप्पण लायक छ। एक पुरा को रूप वातावरण सकारात्मक प्रभाव पार्न कि उत्सर्जन को मात्रा कम गर्न: वैज्ञानिक विकासक्रम एक विचार गर्न converge। एक इन्जिन यस्तो सिर्जना गर्न, तपाईं पूरै प्राविधिक व्यवस्थापन अद्यावधिक गर्न र विद्युतीय कार्यक्रम संग सुसज्जित गर्न आवश्यक छ। यो चाँडै व्यावहारिक ऊर्जा आवश्यक गर्दैन र प्राकृतिक मूल को ईंन्धन मा सञ्चालन हुनेछ भविष्यमा, को कार हुनेछ भन्ने हो।
हामी निर्धक्क भई भन्न सक्छौं यो लागत-प्रभावकारी र भविष्यमा शक्तिशाली हुनेछ। आन्तरिक दहन इन्जिन रूपमा यस्तो कुरा हो, बस दैनिक जीवन देखि गायब। जर्मनी केही कार कम्पनीहरु 2050 मा प्रतिज्ञापत्र पूर्ण परम्परागत इन्जिन को उत्पादन बन्द गर्न जो एक विशेष सम्झौता हस्ताक्षर गरेका छन्। जापान, यो केही अविश्वास संग उपचार छ, जापान को कम्पनीहरु छ कि स्पेयर मिसिन तेल हुनेछ 2060 पहिलेको भन्दा तर्क।
भविष्यमा को कार संसारको प्रदूषित छैन। सायद यो प्रवृत्ति लामो समय को लागि देखा छ र सबै मशीनरी निर्माताहरु द्वारा अपनाए छ। त्यहाँ वातावरण लागि बिल्कुल सुरक्षित हुनेछ इन्जिन को एक पूर्ण नयाँ प्रकारको चाँडै उपलब्ध हुनेछ कि एक संभावना छ।
हालसम्म, भविष्यमा को इन्जिन को दुई भन्दा व्यावहारिक प्रतिनिधित्व:
हाइड्रोजन। कारण चाँडै भन्ने तथ्यलाई गर्न हाइड्रोजन को उत्पादन हुनेछ सस्तो पर्याप्त इन्जिन उत्पादन धेरै मोटर वाहन कम्पनीहरु लाभदायक हुनेछ।
बिजुली। त्यहाँ जो पर्खाल आउटलेट देखि recharged वा चार्जर्स प्रयोग गर्न सकिन्छ एकाइ, सिर्जना एउटा सम्भावना छ।
मृत्यु र दुर्घटना को गम्भीर परिणाम जोगिन गर्न, यो पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। भविष्यमा को कार, सम्भवत, पहिले नै तिरस्कार गर्ने सडक दुर्घटना को 90% अमानवचलित नियन्त्रण हुनेछ।
यो वाहन चलाउनु हुनेछ बुद्धि सिर्जना गर्दा, कार को भित्री अलि परिवर्तन हुनेछ भने गर्नुपर्छ। शायद सामान्य अवकास रहनेछ। त्यहाँ भित्री एक सोफा र केन्द्र प्रोजेक्टर एक सानो घर जस्तो हुनेछ बलियो सम्भावना छ। भविष्यमा कार डिजाइन इलेक्ट्रनिक्स आधारित हुनेछ। यांत्रिक भागहरु कि सुरक्षा बृद्धि हुनेछ, पूर्ण गायब। यो खातामा सानो घर मा एक व्यक्ति, जहाँ यसलाई जान चाहन्छ डाटा मात्र स्थान प्रविष्ट गर्न हुनेछ भन्ने तथ्यलाई लिन, अरू सबै कुरा उहाँलाई एक कार बनाउन हुनेछ आवश्यक छ।
कार को आयाम
कि थप र थप वाहन सडक देखा तर्क केही थियो। यस राजमार्ग मा एक स्थान, त्यहाँ कम छन्। किन प्राथमिकता भविष्यमा को कार रूपमा, एकाइ को डिजाइन को compactness छ भन्ने छ। के यो अब भन्न गाह्रो हुनेछ, तर हामी मान्छु गर्न सक्नुहुन्छ, सम्भवत, शरीर को आयाम सकेसम्म तुलना मा सामान्य मोडेल कम छन्, र सायद पनि कार परिवर्तन गरिनेछ।
त्यहाँ पनि विपरीत धारणा छ हुनत - कार चालक र यात्रु लागि सबैभन्दा सहज अवस्था सिर्जना गर्न विशाल प्रकारका हुनेछ।
तिनीहरूले स्थिति आधारमा परिवर्तन गरिनेछ जब कार को आंतरिक सार्ने बारेमा भन्न कि रोचक संस्करण देखिन्छ। खेल कार राम्रो प्राप्त हुन सक्छ र मार्गदर्शन नियन्त्रण, स्वचालित साथ। बस एक खुशी एक स्टेरिड़ र pedals बिना केही महिना पछि चालक प्राप्त के कल्पना!
हावा बिना टायर
यो लामो सुरक्षा को उच्चतम स्तर हुनेछ र क्षतिग्रस्त छैन भनेर टायर बनाउन कार्य कार सिर्जना मा गरिएको छ आए। यो मुद्दा को संकल्प, तर यो छैन - पहिले यो inflatable टायर भनेर सोचे थियो। मा परेर सामान्य मिसिन चाल संकुचित हावा, को निलम्बन मा "प्रभाव" भनेर।
त्यहाँ ग्रिड को टायर spokes भविष्यमा को कार मा राख्न गरिने सुझावहरू छन्। यो "गियर" के हुनेछ? हामी अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। मिसिन को उपकरण प्रयोग गर्दा हावा र यो प्रविधि जो उच्च बल र लचीलापन घमण्ड अनुमति दिन्छ प्रयोग गठन रबर को spokes भर छैन। यी टायर Bridgestone हाल उत्पादन गर्छ। तथापि, तिनीहरूले हालसम्म मात्र golfkare प्रयोग गरिन्छ। कम्पनी को उद्देश्य (तल तस्विरमा) कार भविष्य क्षमता बोकेको र चाँडै प्रयोग गरिरहेका छ यस्तो supernovae टायर मा सवारी हुनेछ।
जो बिना यो कार भविष्य हुनेछ?
संगीत खेलाडी। उहाँले आधुनिक कार मा विलुप्त को कगार मा पहिले देखि नै छ। यो कारण थप र थप चालक खेलाडीहरू र स्मार्टफोन प्रयोग गर्दै छ। बस वायरलेस हेडफोन वा कार्यक्रम मार्फत वाहन सिस्टम आफ्नो ग्याजेट जडान, संगीत सुन्न।
बटन। सायद, भविष्यमा को कार (फोटो तल उपलब्ध) एक स्पर्श प्यानल संग सुसज्जित गरिनेछ।
यांत्रिक लीवर। पहिले नै, गाडी को विशाल संख्या स्वचालित प्रसारण छ।
वाहन स्केल। बिस्तारै albeit पूरा विस्तार, तर यो लगभग फैशन बाहिर गएको छ, र केहि कम्पनीहरु विकल्प र डिजाइन विकल्प धेरै छ कि एक कार प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
अलग सामान्य वैकल्पिक disappearances देखि, र "सफा" एसयूवी विदाई भन्न छन्। क्षणमा, बजार सडक जित्न कठिनाई बिना सक्षम छन् कि साँच्चै टिकाउ मिसिन प्रस्ताव गर्न सक्दैन।
सबै कार भविष्यमा को एक प्रविधिले संचालित हुनेछ। कार यस्तो सबैलाई विस्मित, पनि सबैभन्दा संदेह चालक!
ऐतिहासिक, कि लागि दशकहरु मान्छे, शहर बस्न सार्दा गर्दै गाउँ र Hamlets छोडेर छ। त्यसैले, एक बढ्दै जनसंख्या ओभरफ्लो राजमार्गहरू छ। यो विशेष गरी ठूलो शहर साँचो हो। कौशलतासाथ अन्य कार बीच चाहेअनुसार मोड्न गर्न, संकुचित मिसिन आवश्यक छ। यो सानो पार्किङ स्थान मा squeeze गर्न सक्षम हुनेछ। भविष्यमा को अवधारणाहरु कार निरन्तर परिवर्तन, तर एउटा कुरा स्थिर रहन्छ - आफ्नो सार्ने बनाउन इच्छा सबैभन्दा सानो र सुविधाजनक हो।
ठूलो समाधान मिसिन CityCar छ। त्यो सजिलै सार्ने जब बेचैनी पैदा बिना सडक छेउ मा हिंड्न सक्छ। 1.5 - यसको लम्बाइ - unfolded फारममा जोडेको 2.5 मीटर मा। ड्राइभर उत्पादन ढोका मार्फत र गाडीको अगाडीको शिशा मार्फत या त प्रदान गरिएको छ। त्यसैले, पार्किङ समस्या उत्पन्न छैन।
दुनिया मा safest कार AirPod सकिन्छ। आफ्नो "छोराछोरीलाई" राम्रो मिसिन भविष्य हुन सक्छ। पहिले नै बिजुली र फोहोर मा चलिरहेको कार छन्। यो कुनै विकल्प संग तर हावा गर्न कारखाना एक उदाहरणका छ। कार्बन डाइअक्साइड को वातावरण मा जारी लगभग शून्य छ। इन्जिन, पिस्टन को माध्यम द्वारा चलिरहेको छ आन्तरिक दहन इन्जिन रूपमा, तर तिनीहरूले इन्धन र संकुचित हावा मिश्रण प्रक्रिया छैन। यो कार कठिनाइको दुर्घटनामा इन्जिन विस्फोट संभावना छ जब कि वास्तवमा निहित। तर उत्पादकहरु यो हेरविचार लिएका छन्, र mechanically मिश्रण इन्जिन को बाहिर आ कारण जो ट्यांक चर्किएको, क्षतिग्रस्त भने।
कम्पनीहरु ले एक कार र मानिस बनाउन र सट्टा पार्क गर्ने प्रयास गर्छन्। यस्तो छ कि मान्छे कार भविष्य हेर्नुहोस्। यस्तो वाहन Google द्वारा प्रस्तावित गरिएको छ।
सिर्जना यो मिसिन को टोयोटा Prius आधारित छ। यो किलोमिटर 500 भन्दा बढी हजार पारित गर्न सक्षम छ।। तर, यो हालसम्म मात्र नेवादा र क्यालिफोर्निया मा प्रबन्ध गर्न। त्यहाँ व्यवस्था स्वचालित नियन्त्रण मा वाहन को प्रयोग निषेध छैन।
मिसिन को अर्थ यसको छत अदृश्य रेज albeit, एक विशेष राडार स्थापित छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। तिनीहरूले यो तिनीहरूलाई मदत गर्न दर्पण वरिपरि स्पेस "जाँच्न", र डाटा प्रोसेसर हस्तान्तरण गरिएको छ। सुसज्जित स्पर्श प्यानल संग बम्पर, तिनीहरूले जो कोहीले संग टकराव जोगिन। Windscreen यातायात संकेत र सडक संकेत अगाडि वा सडकको अर्को भाग मा स्थापित जो माथि क्यामेरामा "निम्नानुसार"। मार्ग चयनको लागि जीपीएस पूरा गर्दछ। उहाँले सबैभन्दा सफल र छोटो बाटो रोज्ने।
स्वचालित प्रसारण संग वाहन कसरी रस्सा छ?
मालिकहरूको लीफान Solano समीक्षा। एक उचित मूल्य लागि मध्य-आकार पालकी
प्याकेजिङ्ग विकास रुझान: त्यो winemakers, brewers र दबाइ को बोतल मा बेचिन्छ
निर्माण एकेडेमी, Dnepropetrovsk। निर्माण एकेडेमी: कम स्थानहरू
चक्कु "SMERSH": प्रयोग को अनुभव
गुलाबी सामन र पनीर, एक तरकारी, एक फर कोट। व्यञ्जनहरु र सुझावहरू
होटल मार्लिन Inn Resort4* Hurghada, मिश्र: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
पुरातन मिश्री देवी Bastet। मिश्रको बिरालो-देवी Bastet
क्रसबो "Archon": आधुनिक प्रशोधन मा मध्ययुगीन हतियार
किलोवाट घण्टा के हो (किलोवाट / घन्टा)